Ireo no antony sasany mahatonga ny finday sinoa mora vidy | Vaovao momba ny gadget
ny Finday avo lenta sinoa manana ny fitomboany eo amin'ny tsenan'ny telefaona finday izy io, ary tsy any Chine ihany, toy ny nitranga hatrizay, fa eo amin'ny tsena manerantany ihany koa. Ny mpamokatra sasany toa an'i Xiaomi na OnePlus dia nahavita nandresy tamin'ny mpampiasa azy ireo mpampiasa marobe, izay na dia eo aza ny zava-misy matetika fa tsy mivarotra ny fitaovany mivantana izy ireo, dia tsy niraharaha firy izy ireo hahazoana terminal tsy dia lafo sy tsara.
Ary amin'ireo lafiny roa ireo no ivoahan'ny fahombiazan'ny fitaovana finday amin'ny fanamboarana sy fiaviany sinoa. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana vidiny ambany dia ambany raha oharina amin'ireo fitaovana hafa amboarina any amin'ny firenen-kafa ary mirehareha amin'ny fotoana maro manana toetra mampiavaka sy miavaka manokana. Raha nanontany tena ianao nandritra ny fotoana fohy ny antony mahatonga ny finday mora vidy, anio dia hanazava azy aminao amin'ny antsipiriany be izahays.
Aza adino fa eny, azo ampiharina amin'ny ankamaroan'ny finday avo lenta sinoa io, fa ho an'ny rehetra, satria fantatrao tsara fa misy fitaovana finday avy amin'ny sinoa manana tombony be ary indraindray misy vidiny lafo be.
1 Fahombiazana avo lenta, saingy saika tsy hitotongana mihitsy
3 Fividianana kely indrindra amin'ny marketing
4 Ny fivarotana an-tserasera no lakileny
5 Tsy voafetra ny famokarana
6 Mora, fa tsy kalitao ratsy
Fahombiazana avo lenta, saingy saika tsy hitotongana mihitsy
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny finday vita any Sina lafo vidy amin'ny fifaninanana dia na dia izany aza manana fahombiazana avo lenta, saika tsy mahafaty mihitsy izy ireo. Ohatra ireo mpikirakira hitantsika amin'ny finday avo lenta sinoa dia tsy mahita Snapdragon na processeur manara-penitra velively isika, saingy mahita mpisolo toerana mahaliana isika, eny, izy ireo dia hanatanteraka tsara ny tanjon'izy ireo.
Ny ampahany iray hafa izay mampihena ny vidiny rehefa eo amin'ny efijery ny fanamboarana ny fitaovana, izay saika ny mpanamboatra sinoa dia matetika no manana ny fanampian'ny Japan Display izay manome efijery tsara, nefa ohatra ambany noho ireo napetrak'i Samsung na Apple ao amin'ny tobiny.
Ary farany, misy singa maro hafa amin'ny hardware toy ny RAM na ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana ny tranga anaovan'ny mpanamboatra vola euro vitsivitsy izay misy akony amin'ny vidiny farany.
Ny asa no antony iray lehibe manosika ny finday sinoa mamely ny tsena amin'ny vidiny ambany toy izany. Ny famokarana fitaovana any Shina dia manana vidiny ambany dia ambany ary izany no antony hanararaotan'i Xiaomi, Huawei na Meizu azy.
Apple, Samsung ary ireo mpanamboatra hafa dia mijaly amin'ny vidin'ny asa ambony any ivelan'i Shina ary farany mampiakatra ny vidin'ny terminal any am-piasana. Na dia eny aza, mihabetsaka ny singa na ny ampahany amin'ireo mpamokatra any amin'ny firenen-kafa izay amboarina ao amin'ny firenena Aziatika mba hitehirizana ny vidiny sy hampihenana ny vidin'ny finday avo lenta, zavatra iray ilaina mba hitohizan'ny hazakazaka hanjakazakan'ny tsenan'ny finday. .
Fividianana kely indrindra amin'ny marketing
Azo antoka fa raha nijery fahitalavitra ianao tato anatin'ny andro vitsivitsy dia ho hitanao fa saika tsy tapaka ary amin'ny fantsona rehetra dia afaka mahita doka fampiroboroboana ho an'ny iPhone vaovao 7. Apple isaky ny mandefa smartphone na saika misy fitaovana eny an-tsena dia mandany be vola ao amin'ireo doka ireo sy karazana varotra rehetra.
Ny zavatra tsy ho hitanao dia dokambarotra ho an'i Xiaomi amin'ny fahitalavitra Espaniôla na saika firenena rehetra. Io dia mampihena be ny vidin'ny smartphone rehetra mahavoa ny tsena.
Mikasika io lafiny io dia tsy maintsy averina fa na eo aza ny tsy fanaovan'ny mpanamboatra sinoa ny tenany amin'ny fahitalavitra dia manana dokam-barotra ampy izy ireo, miaraka amin'ny vidiny ambany dia ambany izay resahan'ny tsirairay.
Ny fivarotana an-tserasera no lakileny
Fomba iray hafa tsara hampihenana ny vidiny farany an'ny finday rehetra ny amidio ihany amin'ny alàlan'ny tamba-jotra. Izany dia mampihena ny fandaniana amin'ny fanofana fivarotana ara-batana na mpiasa, ohatra, ny orinasa sasany dia mandany vola tena misy fiatraikany mivantana amin'ny vidin'ny fitaovana.
Eny, marina fa ny ankamaroan'ny mpamokatra sinoa dia efa mieritreritra ny hanokatra magazay ara-batana erak'izao tontolo izao, izay antenainay fa tsy hampiakatra ny vidin'ny finday avo lenta aparitak'izy ireo eny an-tsena.
Tsy voafetra ny famokarana
Iray amin'ireo paikady tsara indrindra arahin'ireo mpanamboatra sinoa ny famoronana filan'ny mpampiasa ary koa hamoronana azy eo noho eo. Hitan'izy ireo izany amin'ny alàlan'ny fanambarana ny fandefasana, amin'ny vidiny manintona, fampiroboroboana ny hatsarany ary koa amin'ny fanolorana azy amin'ny fomba voafetra. Mirongatra ny varotra noho ny filàna noforonina sy ny tahotra sao ho lany ny terminal.
Ho an'ny mpanamboatra dia mahavariana izany satria tsy hanana na oviana na oviana na oviana na oviana ny tahiry mihoatra ny fitaovana rehetra izy ireo, noho izany dia mitahiry vola izay hisy fiatraikany mivantana amin'ny vidin'ny fitaovana finday miasa.
Mora, fa tsy kalitao ratsy
Tsy ela akory izay ny tsirairay dia nihevitra ny finday avo lenta sinoa ho fizarana faharoa noho ny kalitaony ratsy saika amin'ny lafiny rehetra, na dia misy vidiny mirary aza ny paosy rehetra. Nanomboka teo dia zavatra maro no niova ary Androany, na dia mbola ambany dia ambany aza ny vidiny raha ampitahaintsika amin'ny terminal hafa eny an-tsena izy ireo, ny kalitaony amin'ny tranga sasany dia tsy tokony hialona ny sasany amin'ireo fitaovana tsara indrindra eo an-tsena.
Araka ny efa nolazainay taminareo, ny mpamokatra sasany dia mitahiry vola amin'ny efijery na amin'ny processeur, saingy tsy mahatonga azy ireo terminal tsy dia misy kalitao izany, fa ny hafa ary manana fahefana mihoatra ny ampy ho an'ny tranga rehetra. Angamba amin'ny fividianana finday avo lenta smartphone dia tsy afaka hireharehantsika tahaka ny hataontsika amin'ny iray avy amin'i Apple na Samsung isika, saingy hitahiry vola be isika nefa tsy hahavery ny kalitaony.
Inona ny hevitrao momba ny antony mahatonga ny finday sinoa ho mora vidy?. Lazao aminay ny antony ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ireo no antony sasany mahatonga ny finday sinoa mora vidy
Toa kely amiko ny fampahalalana momba azy. Tsy hahita snapdragon mihitsy ianao. Mandehana Nanonofy aho fa ny tamba-jotra ny note 3 pro-ko dia manana snapdragon 650. Fampahalalana bebe kokoa alohan'ny hanoratana.
Mpampiasa Apple ... iPhones dia vita any Shina ... Miaraka amin'ny asa mora ...
Ary araka ny nolazain'ny mpiara-miasa teo aloha ... Ny fantsona sinoa misy marika "mendrika" dia miakatra koa ny Qualcomm, fakan-tsary Sony na efijery Japon toa an'i Apple.
Tsy dia miombon-kevitra amin'ny hevitrao rehetra aho.
1. " manana fahombiazana avo lenta, saika tsy mahafaty mihitsy izy ireo. Marina izany raha toa ka tsy nampihatra Huawei (Apple) ny horonantsary mikasika azy, na izay nantsoina mba hampiharana ny tsindry eo amin'ny efijery mikasika, na ny fakantsary roa sosona, na ny fanafoanana an'i Jack ao amin'ny letv, na ny fhd na efijery 2k ao amin'ny maro amin'ireo lafy tsarany ary androany tsy mbola nampidiriny tao amin'ny iphone7 akory io .. ..
2. »ireo mpikirakira izay hitantsika amin'ny finday avo lenta sinoa dia tsy mbola nahita Snapdragon na processeur manara-penitra". Marina izany raha tsy natombok'i xiaomi saika ny fitaovana rehetra tamin'ny snapdragon, na raha tsy nandefa terminal niaraka tamin'ny eynox an'i Samsung i meizu ...
3. »Ny fanaovana fitaovana any Sina dia manana vidiny ambany dia ambany». Tena marina izany, saingy tokony hanome hevitra ianao fa ny orinasa toa an'i Apple dia mitafy ny 100% ny terminal any, toa an'i Sony, toa an'i Samsung, izay tsy mamorona azy rehetra any fa ampahany lehibe, na LG mitovy ...
Raha ny tena izy, Apple dia tsy mamorona singa amin'ny fitaovany, mamolavola azy ireo ary mandidy ireo singa ho an'ny antoko fahatelo, izay ividianan'ny orinasa rehetra, ary i Foxcom no manangona azy ireo ho azy ireo, heveriko fa tsy dia lafo loatra ilay mpiasa.
Mikasika ny fandaniana amin'ny marketing dia marina ny anao, azo antoka fa mahalasa atody iray lafo kokoa, saingy tokony hojerena izany, fa ny mpanamboatra sinoa toa an'i Huawei dia mandany kely kokoa ary mivarotra betsaka kokoa. Ary ny hafa toa an'i xiaomi, oneplus, oppo na vivo dia tsy mandany ary ny dokambarotra ataon'izy ireo tsara indrindra dia resaka vava ary toa tsy nanao ratsy akory izy ireo.
Angamba iray amin'ireo lakilen'ny vidiny mora ireto dia ny ambany noho ny Apple na Samsung ny tombom-barotra azon'ireo orinasa ireo. Satria, ohatra, ny vidin'ny famokarana xiaomi mi5s dia tsy tokony ho samy hafa be amin'ny iphone7 na s7, eo amin'ny $ 200, fa ny iray amidy 400 $, ny iray hafa $ 800 ary ny iray hafa $ 1200. Ny fahasamihafana toy izany dia tsy azo hamarinina amin'ny fampielezan-kevitra dokam-barotra mihitsy. Fa io dia efa hevitry ny tena manokana. Mirary ny soa indrindra.
Fudo dia hoy izy:
Alohan'ny hanoratanao lahatsoratra dia ampahafantaro ny tenanao satria tsy fantatrao ny hevitrao.
Manana Oneplus 3 aho, jereo ireo andinindininy sy daty misy biriky eo am-bavanao.
Mamaly an'i Fudo
American Graffiti dia hoy izy:
Ny mazava dia ny olona maneho hevitra amin'ny bilaogy no manana hevitra betsaka kokoa noho ny ankamaroan'ireo izay manoratra lahatsoratra, na dia amin'ity tranga ity aza dia miharihary tokoa fa saika tsy mandeha intsony. Misoratra anarana amin'ny hevitra alemà rehetra aho, ary koa ireo hevitra hafa.
Raha te hilaza zavatra hafa aho dia hanavaka ireo mpanamboatra sinoa amin'ny dingana 5:
- Voalohany indrindra, dia ireo izay mampiasa marketing nentin-drazana mba hivarotra ivelan'i Shina, toa an'i Huawei, Lenovo na ZTE izay mivarotra eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny mpandraharaha sy fivarotana lehibe, manaraka ny paikady akaiky ny mpamokatra nentim-paharazana.
- Amin'ny toerana faharoa dia apetrako ireo mpamokatra manana ny tsena lehibe (sy saika mampiavaka azy) dia ny tsena sinoa tenany, toa ny Oppo, Vivo na Coolpad, marika izay tena miparitaka be ao Shina saingy tsy laharam-pahamehana ny varotra any ivelany.
- Amin'ny dingana fahatelo dia apetrako ireo mpanamboatra, izay mivarotra betsaka any Shina, eo am-pandefasana ny vokariny, mba hananan'izy ireo vokatra maro manoloana ny tsena iraisam-pirenena, toa an'i Xiaomi, OnePlus (an'ny Oppo), LeEco, Meizu, Zuk (an'ny Lenovo) na Honor (an'ny Huawei). Hanana TCL ihany koa izahay, fa any ivelan'i Shina dia mivarotra eo ambanin'ny marika Alcatel izy ireo ary manao telefaona ho an'ny antoko fahatelo toa ny BlackBerry na ny mpandraharaha.
- Dingana iray eto ambany, apetrako i Umi, Jiayu, Elephone, Ulefone…. izany dia lasa manana paikady mitovy amin'ny ambaratonga fahatelo, fa izay mihetsika bebe kokoa amin'ny elanelana ambany sy salantsalany, miloka foana amin'ireo mpikirakira Mediatek sy toetra "manetry tena" kokoa.
- Ary farany, ny mpamokatra sinoa izay natokana manokana amin'ny fanaovana "clones" amin'ny fitaovana fantatra toy ny Samsung Galaxy na ny iPhone (ohatra GooPhone).
Ahoana no ahafahan'izy ireo manolotra vidiny eo ambanin'ny fifaninanana "andrefana"? Eny, satria tsy dia mampiasa vola firy amin'ny fampivoarana izy ireo dia mampiasa singa miaraka amina volana maromaro eny an-tsena (na dia eo aza ny sainam-pireneny dia mampiasa ny farany avy amin'ny Qualcomm foana izy ireo), ireo mpaka sary dia toa manana fotoana eny an-tsena ihany koa (saika Sony na Samsung sensor), ny fampiratiana matetika dia baiko avy amin'ny antoko fahatelo (Japan Display na Sharp amin'ny ankapobeny), mihena be ny fandaniana amin'ny doka ary mihena ny fandaniana amin'ny fizarana amin'ny alàlan'ny fivarotana "mpivarotra" (toy ny Aliexpress, eBay, Amazon, Tinydeal, DX, igogo… ).
Amin'ny fivarotana any ivelany, fa amin'ny fomba "ankolaka" dia mampihena ny vola fanampiana sy fiantohana izy ireo farafahakeliny, tsy mandoa "royalties" amin'ny fampiasana patanty sy teknolojia, ary tsy mila mizara ny tombony azony amin'ny fizarana sy fivarotana, satria Avy amin'ny "mpivarotra" izany. Ankoatr'izay, ireo vidiny izay toa any Eropa ireo dia toa avo lenta, raha ny marina dia ambony lavitra noho ny vidin'ny varotra any Chine, ka mamela tombony be eny an-dàlana. Ary ireo "mpivarotra enta-mavesatra" rehefa mizara amin'ny antsinjarany, mazàna mitantana mba tsy handehanan'ny ladoany ny vokatra (raha nizara tamin'ny ambongadiny izy ireo, dia ho sarotra kokoa amin'izy ireo ny misoroka izany).
Amin'ny tranga sasany, izy ireo dia orinasa izay novatsiam-bola tamin'ny alàlan'ny fiasana OEM ho an'ireo mpanamboatra "Tandrefana", ka ny milina, ny fampandrosoana ny teknolojia, ny fizotry ny famokarana, ny fikarohana sns ... dia fandaniana an-tsokosoko amin'ireo orinasa ireo.
Valiny amin'ny Graffiti Amerikanina
elliotdns dia hoy izy:
Ny sinoa koa dia manombatombana amin'ny vidin'ny singa: fa tsy manamboatra singa an-tapitrisany hihoatra ny tsena sy magazay ara-batana, dia manamboatra entana kely kosa izy ireo, izay voalohany mivoaka amin'ny vidiny akaiky ny vidiny ary arakaraka ny voalazan'ireo singa ireo ny vidiny mihena dia mampitombo ny taha tombony.
Mamaly an'i elliotdns
daniel gonzalez dia hoy izy:
Fa raha vita any Chine ny iPhone !!!!! Hahaha. Sangisangy tsara ity lahatsoratra ity
Valiny tamin'i Daniel Gonzalez
Tsy manelingelina ny lisitra ny hadalana rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity koa aho… Efa nanao izany tamin'ny fanehoan-kevitra teo aloha. Ka azafady,
MITADIAVA AMIN'NY ASA hafa, SATRIA TSY ANAO NY MPANORATRA !!!!
Pd: tampoka iray amin'ny lahatsoratra iray ...
Sckubba dia hoy izy:
Manaiky bebe kokoa amin'ireo hevitra aho fa tsy amin'ilay lahatsoratra.
Mino tokoa aho fa tsy ampy ny fampahalalana tamin'ny fotoana nanoratako azy satria maro ny marika sinoa miaraka amin'ny haitao manara-penitra ao amin'ny fitaovany. Ary io Apple io dia tsy mamokatra any Shina !!! Fa raha apetrakao amin'ny tranga misy ny vokatrao.
Lojika ny zavatra tsy anaovan'ny marika sinoa marika, ahoana no hataonao amin'ny dokambarotra any amin'ny firenena tsy misy anao? Ny marika sinoa dia manao dokambarotra any Shina, izay amindrany ny 98% amin'ny vokariny. Ankehitriny, ny marika sinoa izay efa misy any amin'ny firenen-kafa, toa ny Huawei, dia manao dokambarotra.
Ny antony lehibe mahatonga ny marika sinoa, izay tsy misy afa-tsy any Chine, dia mora kokoa satria tsy mandoa ny patanty amin'ny fitaovany izy ireo. Bluetooth, NFC, Wifi, sns dia patanty avy amin'ny antoko fahatelo izay tsy maintsy aloa rehefa ampidirina anaty solosaina izy ireo. Any Sina dia tsy andoavana izany. Tsy voaloa koa ny fanamarinana IPxx, ary tsy andoavambola ny VAT (sy haba hafa), izany vola lany rehetra izany no mahatonga ny fihenan'ny fitaovana avo loatra.
Rehefa hipetraka any Eropa i Xiaomi, Meizu, OnePlus, Ulefone, Elephone, sns ... dia tsy maintsy mandoa izany fanamarinana rehetra izany izy ireo raha te hivarotra any ivelan'i Shina ary hiakatra lafo ny fitaovan'izy ireo. Mandra-pahatongan'izany dia manohy mankafy fitaovana lehibe amin'ny vidiny mihena ...
Mamaly an'i Sckubba
Pepe ilay Sinoa dia hoy izy:
Nampihomehy ahy ny fizarana 1 ary tsy namaky intsony aho. Manontania azafady alohan'ny hamoahana
Valiny amin'i Pepe ilay Sinoa
Miguel Cid dia hoy izy:
Tsy dia nahomby loatra ny hafatrao, nankafiziko manokana ny tombotsoan'ny finday avo lenta sinoa leeco le max 2 miaraka amina endri-javatra mahatalanjona snapdragon 820 eo an-tampon'ny tsipika 4 gigabytes fakantsary RAM sony misy 21 mega pixel 64 bits adreno 530 8 cores 2,15 gigahertz 32 gigahertz fahatsiarovan-tena anatiny 5,7 santimetatra QHD efijery ary tsy izy irery io, finday sinoa maro no mampiditra endri-javatra avo lenta amin'ny vidiny mirary ankoatry ny vidiny ambany noho ny 300 dolara.
Valiny tamin'i Miguel Cid
Heveriko fa diso ity lahatsoratra iray manontolo ity, tsy mampiasa ny efijery tsara indrindra izy ireo, hahaha, tsy manana mpikirakira faran'izay tsara na fampisehoana tsara indrindra hahaha, ny efijery iray plus 3 angamba no tsara indrindra eny an-tsena, ny xiaomi mi5s dia iray amin'ireo terminal mahery vaika indrindra ary mampiasa snapdragon izy, ary tsara ny precessors mediatek, manana xiaomi redminote 3 pro miaraka amin'ny mediatek izay manome fampisehoana tsara kokoa noho ny snapdragon maro aho ... Alohan'ny hamoronana lahatsoratra amin'ny finday sinoa, tadiavo mivoaka kely ...
Apple dia mbola tsy afaka mamaly ny fangatahana avo lenta amin'ny iPhone 7